Parkii Gaarreen Bale kutaa 2 – siifsiin
Paarkin Baalee paarkii bineensota achi qofa jiraatan baayyee kan qabu yoo ta’u bineensota Itoophiyaa keessa qofa jiraatan garuu balaa keessa warra jiran baayyedhaaf iddoo murteessadha. PBGB hoosiftoota Itoophiyaa keessa qofa jiraatan 20 fi hoosiftoota Gaarren Baalee keessa qofa jiraatan shaniif iddoo jireenyaati. Hoosiftoonni PBGB keessaa faayidaa guddaa qaban jeedala fardaa (anis simensis), gadamsa gaarrenii (Tragelaphus buxtoni), tuqaa mataa guddaa fi qamalee Baaleeti. Naannon Afroo-alpaayinii, iddoo jeedalli fardaa addunyaan kun qabdu keessaa walakkaan jiraatanidha, jeedalli fardaa addunyaarraa kaaniidii baayyinaan xiqqoo yoo ta’u yeroo ammaa 400 kan ta’an qofatu addunyaarra jira. Bosonni gaattiraa fi heexoo kan gara kaabaatti argamu akkasuma iddoo jireenyaa bineensa balaa jala jiru kan biraa kan ta’e kan gadamsa gaarrenii ti. Gadamsi PBGB keessa jiraatu, baayyina addunyaan kun qabdu keessaa harka lama-sadaffaa ta’a. Dabalataanis, tuqaan mataa guddaa addunyaan kun qabdu martii fi qamaleen Baalee addunyaan kun qabdu baayyeen paarkicha keessa jiraatu. Kana malees, amfibiyaanota Itoophiyaa keessa qofa jiraatan 12 fi reptaayiloota Itoophiyaa keessa qofa jiraatan afur PBGB keessa jiraatu.
Jeedalli fardaa tullu-gubbaa lafa ol ka’aa Itoophiyaa ja’a irratti murta’anii jiru. Walumaagalatti baayyinni jeedala fardaa 400 ta’a, kanaafis sorattoota foonii Afrikaa balaa keessa jiran keessa kan jalqabaati, akkasumas addunyaarraa kaaniidii balaa keessa jiranidha. Sababa kanaaf, seeraan waan jireenya isaanii balaa keessa galchu kamirraayyuu ni eeggamu. Miidhama bidoollee sababa baballina lafa qonnaa fi horii horsiisuutin kan ka’e dhufe balaa isa hamaadha fi guddaadha, garuu dhibeen adda addaa (dhibee saree maraatuu fi canine distemper) kan saree manaarraa jeedala fardaatti darbu balaa ariifachiisaadha, yeroo as dhihootti Garreen Baalerratti ka’uudhaan jeedaloota fardaa baayyee ajjeesee baayyina isaanii ittuu gadi xiqqeesse.
Previous Previous post: Parkii Garreen Baale kuta Tokko
Next Next post: Makmaaksa